ASAM ၏စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် - မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည် ASAM ၏စွဲလမ်းမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်နှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ Q & A ၏လိပ်စာလိင်စွဲလမ်းမှုအနည်းငယ်။ ASAM မှကျွမ်းကျင်သူများကလိင်ကိုတကယ့်စွဲလမ်းမှုဟုရှုမြင်သည်မှာရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စွဲခြင်း (စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များ) သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (မျက်နှာပြင်) နှင့်အတော်လေးကွာခြားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်သူများစွာသည်အင်တာနက်ခေတ်မတိုင်မီကလိင်စွဲလမ်းမှုကိုဘယ်သောအခါမျှမဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခဲ့ကြပါ။
အဓိပ္ပါယ်အသစ်အတွက် ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုလင့်ခ် - ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
စွဲလမ်းမှု၏ ASAM ရဲ့အဓိပ္ပာယ်: မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (သြဂုတ်လ, 2011)
1 ။ မေးခွန်း: အဘယျသို့အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောလား
အတိတ်အတွက်အာရုံစိုက်ထိုကဲ့သို့သောအရက်, ဘိန်းဖြူ, ဆေးခြောက်, ဒါမှမဟုတ်ကင်းအဖြစ်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ယေဘုယျဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဦးနှောက်အကြောင်းကိုရဲ့စေသည်။ ဒါဟာသူတို့ကိုတစ်ဦးစှဲလမျးသူလုပ်မယ့်သူတစ်ဦးကိုအသုံးပြုသည်အဆိုပါတ္ထုများမျှမက, ဒါကြောင့်အသုံးပြုမှုပင်အရေအတွက်သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲလမ်းကိုသူတို့အကြိုးတ္ထုများသို့မဟုတ်အကြိုးအပြုအမူတွေကိုထိတွေ့ကြသောအခါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်အကြောင်းနှင့်ကဆုလာဘ် "ပေါ်တွင်ဖွင့်က" ပြင်ပဓာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ထက်ကဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ်သည်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ဆုလာဘ် circuitry အကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ် circuitry ။ ငါတို့သည်ဤရောဂါ၏ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ် circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
2 ။ မေးခွန်း: ဘယ်လိုစွဲ၏ဤအဓိပ်ပါယျထိုကဲ့သို့သော DSM အဖြစ်ယခင်ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပါသလဲ
စံရောဂါရှာဖွေရေးစနစ်သည်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှထုတ်ဝေသောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင်ရာနှင့်ချီသောကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအခြေအနေများကိုဖော်ပြထားသည်။ DSM သည်ဆေးစွဲခြင်းထက် 'ပစ္စည်းမှီခိုခြင်း' ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်။ လက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'မှီခိုခြင်း' ဟူသောဝေါဟာရကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသည်လူနာအားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်အပြင်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သောအပြုအမူများဖြစ်သည်။ အများဆုံးအသုံးပြုသောဝေါဟာရမှာ 'ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု' ဖြစ်သည်။ အချို့သောဆရာဝန်များသည်ဤအသုံးအနှုန်းကို 'စွဲလမ်းမှု' နှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြပြီးရှုပ်ထွေးမှုများကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ASAM သည်စွဲလမ်းမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးရောဂါဖြစ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများကဲ့သို့သောအပြုအမူများထက် ကျော်လွန်၍ ရောဂါဖြစ်စဉ်ကိုတိကျစွာဖော်ပြထားသည်။
1980 ကတည်းကထုတ်ဝေ DSM ၏ edition မှာတော့ DSM ချဉ်းကပ်မှု "atheoretical" ကြောင်းအလွန်ရှင်းလင်းသောပါပြီ - တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစိတ်ပညာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်သီအိုရီသို့မဟုတ် (ရောဂါမှလာရှိရာ) etiology တစ်သီအိုရီအပေါ်မူတည်မထားဘူး။ အဆိုပါ DSM ရုံအင်တာဗျူးမှတဆင့်တစ်ဦးလူနာအစီရင်ခံစာများကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အပြုအမူတွေသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြုံတွေ့ခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောရပ်ကွက်အတွင်းသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုပမာဏအဖြစ်အမှုအရာ - စွဲလမ်း၏ ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖယ်ထုတ်မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေစွဲ၏ etiology အတွက်ဦးနှောက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကြည့် - ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စွဲလမ်းများ၌တွေ့မြင်အပြင်အပြုအမူတွေကိုရှင်းပြနိုင်မတိကျတဲ့ဦးနှောက် circuitry နှင့်အတူဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို။
3 ။ မေးခွန်း: အဘယ်ကြောင့်ဒီအချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အရေးကြီးသနည်း
စွဲနီးပါးနှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးပြုပုံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်သိသာထင်ရှားသောကမောက်ကမဖြစ်မှုကပါဝငျ - သူတို့ရဲ့အလုပ်အချိန်ကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အဆငျ့, သူတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာ, ကျောင်းအတွက်, ဒါမှမဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာယေဘုယျအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်။ သူတို့စွဲရှိသည့်အခါလူ့သတ္တဝါအလုပ်မဖြစ်အရာအားလုံးအမြိုးမြိုးလုပျနိုငျသညျ။ ဤအအပြုအမူတွေအချို့သည်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး antisocial များမှာ - လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပင်လူ့အဖွဲ့အစည်းဥပဒေများကိုချိုးဖောက်နိုင်ပါတယ်အချို့သောအမှုအရာလုပ်နေတာ။ တဦးတည်းရိုးရှင်းစွာစွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အပြုအမူမှာကြည့်ပါလျှင်, တဦးတည်းတည်ရှိသည်သူတစ်ဦး, cheats သူတစ်ဦးနှင့်ဥပဒေများကိုချိုးနှင့်အလွန်ကောင်းသောကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများရှိသည်မဟုတ်မှပေါ်လာသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မြင်ရလိမ့်မည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမကြာခဏအဲဒီ antisocial အပြုအမူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့နှင့်စွဲနှင့်အတူလူတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အဓိကမှာကြောင်းကိုယုံကြည်ဖို့ခဲ့ရသည် "မကောင်းတဲ့သူတစ်ဦး။ "
သင်အမှန်တကယ်စွဲနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုနားလည်သောအခါ, သငျသညျလူကောငျးအလွန်ဆိုးသောအရာတို့ကိုလုပျနိုငျကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း, စွဲလမ်း၏အပြုအမူတွေကဦးနှောက် function ကိုအတွက်ကိုပြောင်းလဲများ၏အခြေအနေတွင်နားလည်ကြသည်။ စွဲဟာသူ့ရဲ့အဓိကပဲတစ်ဦးလူမှုရေးပြဿနာသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရား၏ပြဿနာတစ်ခုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲရုံအပြုအမူတွေအကြောင်းကိုဦးနှောက်ကိုမအကြောင်းပါ။
4 ။ မေးခွန်း: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစွဲ၏ရောဂါရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုံ, မိမိတို့အပြုအမူအားလုံးကိုတာဝန်ကနေ absolved သင့်သနည်း
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာ ၀ န်သည်လူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းထားသည်အပါအဝင်ဘဝကဏ္ life အားလုံးတွင်အရေးကြီးသည်။ စွဲလမ်းမှုလောကတွင်များသောအားဖြင့်“ သင်သည်သင်၏ရောဂါအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ၊ သို့သော်သင်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သင့်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်” ဟုမကြာခဏဆိုလေ့ရှိသည်။ စွဲနေသောလူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏နာမကျန်းမှုများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါတက်ကြွသောရောဂါအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်အခွင့်အလမ်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါရှိသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏နာမကျန်းမှုကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရန်လိုအပ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းဆက်ဆက်သူတို့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ရပ်များအဖြစ်ယူဆနေကြသည်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူမှုရေးပဋိညာဉ်၏ထိုကဲ့သို့သောစုစုပေါင်းချိုးဖောက်မှုများတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအပြုအမူတွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ စွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းငှါ, သူတို့သည်အကျိုးဆက်များလူ့အဖွဲ့အစည်းသူတို့အားလုပ်ရပ်တွေကိုအဘို့အကွပ်ထားတဲ့ထားပြီးသမျှသောသူတို့သည်လုပ်ရပ်များနှင့်မျက်နှာအဘို့အတာဝန်ခံကျင်းပနိုငျသညျ။
5 ။ မေးခွန်း: စွဲ၏ဤသစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လောင်းကစားဝိုင်းပါဝင်သောစွဲ, အစားအစာ, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရည်ညွှန်းသည်။ ASAM တကယ်အစားအစာနှင့်လိင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါသလား
6 ။ မေးခွန်း: အစားအသောက်စွဲလမ်းသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းရှိပါတယ်ဘယ်သူနည်း ဒီလူဘယ်နှစ်ယောက်ပါသလဲ မင်းဘယ်လိုသိလဲ?
ငါတို့ရှိသမျှသည်အစားအစာနှင့်လိင်အကြိုးစေသည်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီရှင်သန်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာဦးနှောက်အတွက်ဤဆုလာဘ်မွတ်မပြေနိုင်သောသို့မဟုတ်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများရှိ '' အလုံအလောက်။ ' စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်မှာ circuitry တစ်ဦးချင်းစီမှသတင်းစကားတ္ထုများနှင့်အပြုအမူများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်သက်သာ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားမှဦးဆောင်သော '' ကိုပိုမို '' ဖြစ်လာထိုကဲ့သို့သောကြောင်းအလုပ်မဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ ဒီတော့စွဲရှိပြီးသူမည်သူမဆိုအစားအသောက်နှင့်လိင်စွဲမှအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အထူးသ, အစားအစာစွဲသို့မဟုတ်လိင်စွဲကြောင့်ထိခိုက်နေကြမည်မျှလူများအတွက်တိကျသောကိန်းဂဏန်းများမရှိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ကပစ္စည်းဥစ္စာ-related ပြဿနာများနှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရသော, စွဲလမ်း၏, ဤရှုထောင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်ဤအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းအပေါ်သုတေသနအာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
7 ။ မေးခွန်း: တစ်ခုထူထောင်အဖြေရှာတဲ့စနစ် DSM လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရှိကွောငျးအရဒီအဓိပ်ပါယျရှုပျထှေးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ဒီ DSM ဖြစ်စဉ်ကိုအတူယှဉ်ပြိုင်သည်မဟုတ်လော
အဆိုပါ DSM နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်ဒီနေရာကိုမျှကြိုးပမ်းမှုရှိပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းအဖြေရှာတဲ့စံမဆံ့မထားဘူး။ ဒါဟာဦးနှောက်ရောဂါ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဖော်ပြရန်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့် DSM နှစ်ဦးစလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုရှိသည်။ အဆိုပါ DSM လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအရာ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ဦးလက်တွေ့အင်တာဗျူးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့သမိုင်းနှင့်သူတို့၏လက္ခဏာများအကြောင်းကိုစံချိန်စံညွှန်းမီမေးခွန်းမှတဆင့်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့နိုင်အပြင်သရုပ်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အဲဒါကိုစွဲလမ်းနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်တွေ့မြင်အပြုအမူတွေကိုယခုဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာမြားတှငျပွောငျးလဲအခြေခံအကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးနားလည်များမှာအမျိုးမျိုးအပြင်သရုပ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်းဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, ဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောအဓိပ်ပါယျ, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်၎င်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာသောရောဂါဖြစ်စဉ်၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမူတည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorders ၏ diagnoses ကျော်လွန်သောအခြေအနေတွင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့သတိရှိသောလိမ့်မည်။
8 ။ မေးခွန်း: ကုသမှုများအတွက်, ရန်ပုံငွေများအတွက်, မူဝါဒအဘို့, ASAM များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲ?
ကုသမှုများအတွက်အဓိကဆိုလိုကျနော်တို့ရုံတ္ထုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မထားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာဇီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသရုပ်ရှိကြောင်းဦးနှောက်ထဲမှာနောက်ခံရောဂါဖြစ်စဉ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ သစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏တာရှည်ဗားရှင်းကပိုအသေးစိတ်တွင်ဤဖော်ပြသည်။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများကြောင့်ကုသမှုသတိထားမိယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ်လစီ / ပြည့်စုံဖြစ်နဲ့စွဲနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေထက်ပစ္စည်းဥစ္စာတိကျတဲ့ကုသမှုအားလုံးရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အခြားတ္ထုများ အသုံးပြု. ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်သက်သာ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စား၏ switching ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သောနဲ့ရမယ် သို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။ ဘက်စုံစွဲကုသမှုစွဲရှိပြီးသူတစ်ဦးအတွက်စွဲလမ်းနိုင်အားလုံးတက်ကြွစွာနဲ့အလားအလာတ္ထုများနှင့်အပြုအမူနှင့်နီးစပ်သောအာရုံကိုလိုအပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဘို့အအကူအညီကိုရှာရန်အဘို့အဒါဟာဘုံသော်လည်းပြည့်စုံသောအကဲဖြတ်မကြာခဏဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမကြာခဏကုသမှု၏အာရုံသာဝတ္ထုများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတိကျတဲ့သည်အဘယ်မှာရှိအစီအစဉ်များအတွက်လွဲချော်ဖြစ်ကြောင်းအများအပြားပိုပြီးလျှို့ဝှက်သရုပ်ဖော်ပြသည်။